हाम्रो देशको हरेक इन्च जमिन हामिलाई मुटु भन्दा प्यारो छ’ – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/हाम्रो देशको हरेक इन्च जमिन हामिलाई मुटु भन्दा प्यारो छ’
हाम्रो देशको हरेक इन्च जमिन हामिलाई मुटु भन्दा प्यारो छ’
६ महिना पहिले भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र समावेश गरेको थियो । आफ्नो नक्सामा नेपालको भुभाग पारेको ६ महिनापछि भारतले व्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्ग उद्घाटन गरेको छ ।
पाँच बर्ष पहिले नेपालमा भुकम्पको वेला भारत र चीनले नेपालसँग कुनै सम्झौरा नगरी लिपुलेक पासबाट व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेको थियो । हाल कोरोना महामारीका बीच सोही सम्झौतालाई पूरा गर्दै भारतले सडकमार्ग उद्घाटनसमेत गरेको छ ।
यस्तैमा नायिका रेखा थापाले देशको सिमा अतिक्रमण भएको बेला जनता एक जुट हुनु पर्ने बताएकी छिन् । उनले आफ्नो फेसबूकमा लेखेकी छिन् – ‘ सिमा अतिक्रमण भएको बेला जनता र राजनीतिक शक्ती एकजुट हुनु पर्दछ । जुनसुकै मुल्यमा आफ्नो सिमा रक्षा गर्नु हाम्रो पुस्ताको दायित्व हो । कुनै पनि प्रकारको आत्मसमर्पण अक्षम्य हुनेछ । ‘
देशको जमिन मुटु भन्दा प्यारो भएको भन्दै उनी लेख्छन् – ‘राष्ट्रियता कसैलाई सरकारमा पुर्याउने भर्र्याङ् होइन । कसैको राजनीतिको भजन होइन । यस्तो बेला लिने अडानले देखाउछ क-कस्को दावी खोक्रो छ ? कस्को अडान देसभक्तीले भरिएको छ ?’
सुनसरीका एक काेराेना संक्रमित अस्पतालबाट फरार, कतै देखे प्रहरीलाई खबर गर्न आग्रह
सावधान ! यसरी घुम्दैछन् काठमाडौंमा अप’हर’णकारी, प्रहरीले सर्तकता अपनाउन गर्यो आग्रह